ArchiCAD, oo ah qalab barnaamijka CAD ah oo loogu talagalay ardayda iyo macalimiinta - Geofumadas
Febraayo, 2008 ArchiCAD, AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
ArchiCAD waa mashruuc CAD ah oo suuqa ku jiray muddo dheer, inkastoo markii hore ay ahayd Mac version, waxay ahayd ilaa 1987 in version 3.1 loo yaqaan.
Haddii aad xusuusto, ArchiCAD 3.1 horeyba waxay ka soo horjeeday AutoCAD 2.6 ee 1987, sida DataCAD iyo DrawBase ay sameeyeen, laakiin waa sanadihii ugu dambeeyay ee ay ku fashilmeen inay noqdaan kuwo caan ah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah faa'iidooyinka ay:
Waa bilaash ardayda iyo macalimiinta
Qorshahani waxa uu yahay ugu dagaal badan in bilaabay nidaamkan, sida in ay u soo dejisan u baahan tahay oo kaliya diiwaangelinta, markaas kuu soo diro lambar sir ah ku meel gaar ah in aad u xaqiijiso bisha. Sannad ka waa in aad la cusboonaysiinta furaha, laakiin sida aad u aragto macallin ama arday aad u isticmaali kartaa oo aad loo isticmaalaa in lagu isaga ku xirneyn, haddii aad wax kama qaba mashaariicda ahbaa hogaanka on logo geeska a Graphisoft.
Waxaa loo heli karaa Mac iyo PC
Arimahan dhexdiisa, ArchiCAD ayaa weli si fiican u aqbalaan isticmaalayaasha Mac, kadib AutoCAD Macku wuxuu ka bixi doonaa sanadka 1993 iyo Microstation sanadka 1995. ArchiCAD waxay ogolaanaysaa inay la shaqayso DWG, DXF, IFC iyo Sketchup iyo qaybaha waa la horumarin karaa iyadoo loo eegayo Geometric Description Language (GDL)
Lagu qaabeeyey isbeddellada caadiga ah
Laga bilaabo bilowgii ArchiCAD waxay qaadatay waxoogaa faa'iido leh, iyada oo ah qalab wax ku ool ah, oo aan la socon. Waxaa cad in ay u ahayd suuqa dhismaha iyo dhismaha oo ka duwan AutoCAD, taas oo ahayd qalab guud oo sawir. Tani waxay horseeday heer gaara oo faa'iido leh, markii AutoDesk ay heshay Muuqaalka Muuqaalka ArchiCAD horeba waa mid aad u caan ah. Iyadoo isbedelada cusub ee ArciCAD ay ku habboontahay fikradda BIM (Dhismaha Macluumaadka Dhismaha), Dhismaha Virtual hoos liisan si ay u sii isbeddellada caalamiga ah ee software AEC. muhiimadda ay leedahay ayaa waxa uu yahay in dhufto ee ah in la horumariyo codsiyada gaarka ah si fudud waa la qabsan kara in duurka ku of naqshadaha iyo injineernimada, iyo mawduuca daabacaadda, jeexan abuurayo, iyo views xudduud ma yihiin kakanaanta.
La shaqeyn karo goobo kala duwan
CYPE, ArchiCAD waxay xiriir la leedahay codsiyadaas khaaska ah ee loogu talagalay naqshadeynta injineernimada mashaariicda dhismayaasha (dhismayaasha iyo rakibo), si ay u heli karto labada dhinac ee loo marayo qaababka IFC.
Archimedes, Tani waa codsi ujeedkiisu yahay qiyaasidda shaqada iyo isdhexgalka kharashyada; ArchiCAD waxay u oggolaanaysaa isku xirka laba-laaban ee Archimedes.
Google Earth, Iyadoo ArchiCAD aad la macaamili karto Warehouse Goobta Google, ma aha oo kaliya in lagu rakibo moodooyinka oo ay ku muujinayaan dhismayaasha 3D laakiin sidoo kale inay soo dejiyaan xogta Google Earth.
Sketchup, Tani waa mareegta Google-ku heshay, oo loo adeegsanayo qaabaynta 3D waxay leedahay faa'iido u ah inay noqoto mid aad u sahlan marka la barbar dhigo; dhowr daqiiqadood waxaad ku shaqeyn kartaa fikrad adag oo leh dhadhan fiican. Marka la eego fiilooyinka ArchiCAD ee Sketcup, waxaad shaqo ku heli kartaa Sketchup, taasina waxaa lagu aqoonsanayaa qaabka dhismaha ee smart.
MaxonForm iyo AtlantisR, Is-dhexgalka ArchiCAD ee tikniyoolajiyadani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku daydo, hagaajiso oo aad bixiso walxaha qalafsan ama kuwa aan-ahayn dhaqanka ee naqshadaha qaab-dhismeedka dhaqameed; Ahaanshaha "hal guji" ayaa ku siinaya natiijooyin wanaagsan.
KAALMADA IYO KAL-KA BIXIYAHA VYP, Iyadoo loo marayo qaabka cte, xiriirka ArchiCAD ayaa la sameyn karaa, u dhigaya qalabka iyo hantida udubdhexaadka ah iyo sidan si faa'iido leh uga faa'iideystaan ​​codsiyadaas khaaska ah ee ku oolinta tamarta.
Halkan waxaad soo dejisan kartaa ArchiCAD
ArchiCAD waxay yeelan doontaa bandhiga Bandhiga Caalamiga ah ee Farsamada Caalamiga ah ee lagu qaban doono Dugsiga Polytechnic ee Febraayo.
Post Previous«Previous Koorsada Ururka Territorial
Post Next Khariidadaha Google, cabbirka afaraadNext »
11 Waxay u jawaabaan "ArchiCAD, software CAD lacag la'aan ah ardayda iyo macallimiinta"
Cilmi-baaris ku samee xeeldheer Laga soo xigtay
vazha isagu wuxuu leeyahay:
Guul Hugo isagu wuxuu leeyahay:
Waan fiicanahay waxaan daawanayey casharo fiidiyoow ah oo ku saabsan barnaamijkan ArchiCAD sidaa darteed waxaan xiiseynayaa barnaamijkan sida aan u soo dejisan karo
B. Cricket isagu wuxuu leeyahay:
Sannado badan waxaan ahaa isticmaale Muuqaalka Muuqaalka, Waxaan u maleynayaa inaan bilaabay AAD 2000 oo ku salaysan Autocad R14. Markii ugu horeysay ee aan haysto ArchiCAD waxaan gacmahayga geliyay waxaan dareemay in adduunka la bedelay. Marna marna isticmaal Isticmaalka Muuqaalka, inkastoo aan garowsanahay in waqtigii ugu dambeeyay ee aan arkay isaga oo isticmaalaya waxaan dareemay in uu si fiican u fiicnaaday, ArchiCAD mar hore way i guuleysatay.
Ramiro Pinto isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa barnaamijka arjiga ee Mac
Hagaag, waxaan haystaa maktabadaha oo waqtigana barnaamijku si otomaatig ah ugu meeleeyo sedex barnaamijka sanadlaha ah, sideen u xallin karaa hadii maktabadaha ay la jaan qaadayaan diiwaanada uu adeegsanayo iyo sida tan loo xaliyo maxaa yeelay waxay ubaahantahay nooc 2.6 ah oo aan ku balan qaadayo noocaan iyo sida Waxaan taas ku xallinayaa farriinta sida aan u xallinayo indhahayga in dabaylkeygu ay si fiican wax u wadaan hadda haddii barnaamijku khaldan yahay maxaa yeelay waxaa si xun loogu qaabeeyey mahadsanid oo fiiro gaar ah u yeelo aniga oo weli gacanta ku haya in kabadan laba boqol oo arday oo dhigta jaamacadda architecture-ka mana fiicnaan laheyd. kula talin in barnaamijku noqon lahaa fogaan dhexda
Hagaag, waa inaad ku furtaa barnaamij GIS ah (waxay noqon kartaa Manifold, ArcGIS ama xitaa Khariidadda AutoCAD), ka dibna ku meelee nidaam nidaam iskuduwid ah. Google Earth wuxuu u baahan yahay inaad meeleysid isku-duwe joqoraafi ahaaneed iyo WGS84 datum.
Marka qiyaasta la qoondeeyey, faylka ayaa lagu keydiyaa qaabka kml, waxaana lagu muujin karaa dhulka google.
En boostadan waxaan u adeegsanay dwg leh manifold
RODRIGO CASTRO isagu wuxuu leeyahay:
Su’aal fadlan, sidee ayaan fayl uga soo dhex saaraa buugga sawir-qaadaha 'autocad polygon' ee ku jira isku-duwayaasha dhulka ggogle? Waan ka mahadcelinayaa jawaabtaada, aad baad u mahadsan tahay.
Darwin, waad arki kartaa boostada, halkaasoo uu jiro codsi ku yaala Excel si uu u beddelo isu-duwaha UTM ee Geographical
Waxaan idiin sheegayaa in aan u baahanahay barnaamijka UTM ee loo yaqaan "GEogrics"
jose emilio rivas ramirez isagu wuxuu leeyahay:
Macluumaad fiican, mahadsanid